The Gardener: ရန်ကုန်ပြန်လက်ဆောင်များ
သေဖို့အရေးကြီးတယ်။ အဲဒါနဲ့နာရေးကူညီမှုအသင်းကိုသွားကြည့်တယ်။ ဝှိုက်ဘုတ်ကြီးနဲ့ ဒီနေ့ ဘယ်သူသေ၊ ဘယ်သူပို့၊ ဗော်လန်တီးယား ဘယ်သူက လိုက်ကူ စသဖြင့် စာရင်းတွေရေးထားတယ်။ အသုဘကန်ထရိုက်လက်မခံဘူုးတဲ့။ ရန်ကုန်ပြန်ပြီး အသုဘ ကန်ထရိုက်လုပ်ဖို့ မစဉ်းစားနဲ့တော့။
အဲဒီယာဉ်က နှယ်နှယ်ရရမဟုတ်ဘူး။ ဒဂုံမြို့သစ်က အမှိုက်တွေလှည့်ကောက်နေတဲ့ကား။ စည်ပင်ကလူတွေ ဓာတ်ဆီလာဖြည့်ပေးဖို့တောင်ကောင်းတယ်။ အမှိုက်ကလည်း ကောက်လို့မကုန်ဘူးတဲ့။ ဝိသာခါကျောင်းအမကြီးရဲ့ဆွမ်းအုပ်လိုပဲ၊ ခပ်သလောက်ထွက်နေပုံရတယ်။
မြန်မာလူမျိုးလောက် စာအုပ်ချစ်တာ မြန်မာလူမျိုးပဲ။ စာသာ ကောင်းကောင်း မတတ်ကြတာ။ ငါတို့လူမျိုးတွေဟာ စာအုပ်သိပ်ရိုသေတယ်။ စာအုပ်နင်းမိရင်တောင် တောင်းပန်သူတဲ့၊ ပြန်ရှိခိုးတဲ့သူနဲ့။ စာကြတော့ ဟုတ်တိပတ်တိမဖတ်ကြပါဘူး။ ဖတ်ချင်တဲ့သူတွေဖတ်ဖို့ စာကြည့်တိုက်တော့ရှိရမယ်။ စာကြည့်တိုက်ကို တန်ဖိုးမထားတဲ့လူမျိုးဟာ အင်မတန် အဆင့်နိမ့်တယ်။ စာပေကို မြှင့်တင်ရမယ်။ စင်အမြင့်ကြီးတွေဆောက်ပြီး အပေါ်ဆုံးမှာထားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ ကောင်းမွန်တဲ့စာပေ၊ အသိပညာပါတာတွေ များများထုတ်ရမယ်။ အမှိုက်တွေကို များများမထုတ်နဲ့။စာရွက်ကုန်တယ်။ စာတစ်အုပ်လောက် ကောင်းကောင်းဖတ်လိုက်ရင် ဘဝမှာ အင်မတန်နေတတ်သွားတာမျိုးဖြစ်ရမယ်။ ဥပမာ ယောနသံစင်ရော်။ နေဧလိမ်နည်း။ ဘကြီးဥရဲ့ တစ်သက်တာမှတ်တမ်း။ ဆရာတော်ဦးဇောတိကရဲ့ သိက္ခာရှိရှိနေမယ်။
စာကြည့်တိုက်လည်းရှိတယ်။ ထိုင်ခုံတော့သိပ်မရှိဘူးထင်တယ်။ အဲဒီလိုလေးတွေ ထိုင်ဖတ်နေကြတာတွေ့တယ်။ စာဖတ်တာကောင်းတယ်။ မကောင်းဘူး မပြောတော့ဘူး။ အသက်ကြီးလာလေ တစ်ခုခုကို အကောင်းအဆိုးပြောရတာ ငြီးငွေ့လေလေပဲ။ စာဖတ်ချင်လည်းဖတ်၊ မဖတ်ချင်လည်းနေ။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့်ဘဝကိုယ် တိုးတက်အောင်လုပ်ကြပါ။ တန်ဖိုးရှိတာတွေကိုတော့ ဖတ်ချင်လည်းဖတ်ကြပေါ့။ ဖတ်ပြီးရင်လည်း လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်ကြပါ။ စာအုပ်ဖတ်ပြီး ရပ်သွားရင် စာဖတ်တဲ့ကျေးဇူးမများဘူး။ ဖတ်ပြီးရင် နည်းနည်းတော့ ရေးထားလိုက်။ ဘဝမှာ ဘယ်လိုနေသွားမယ်။ ဘယ်လိုလေး ပြုပြင်လိုက်မယ်ဆိုတာလေးတော့ ရှိရမယ်။ အဲဒီလို ဘဝထဲကို စာထဲက ပညာတွေ ရောက်လာရင်တော့ အင်မတန်ကောင်းတာပေါ့။
ဒီကားကြိုက်သလား။ စီးချင်စီး။ အိပ်လျက်စီးရမယ်။
နာရေးကူညီမှုအသင်းမှာလာပြီး တစ်ချို့တွေ ကုသိုလ်လုပ်တယ်။ အခမဲ့ဆံပင်ညှပ်တာတို့ဘာတို့ပေါ့။ ကောင်းတယ်။ ဆံပင်ဝင်ညှပ်ခဲ့ဦးမလို့ပဲ။ သိပ်ဂုံးဆင်းတာမကောင်းဘူးဆိုပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဟန့်လိုက်ရတယ်။
အဲဒါက သုခဆေးခန်းခေါ်တယ်။ အရင်တုန်းကတော့ နည်းနည်း တန်းစီရတယ်ဗျ။ အခုတော့ တော်တော်လေး အဆင်ပြေလာတာတွေ့တယ်။ အရင်ဆို မျက်လုံးခွဲတာတွေဘာတွေအတွက် စက်မရှိဘူး။ ဗော်လန်တီယာ လာထုိုင်ပေးတဲ့ဆရာဝန်ရဲ့ ဆေးခန်းသွားရတယ်။ အခုတော့ စက်တွေ တော်တော်လေး စုံလာပြီ။ ဖုန်းနဲ့ booking ကြိုယူလုို့ရတယ်။ တစ်ရက်ပဲကြိုယူရတယ်။ လူနာစောင့်တဲ့ အဆောင်လေးလည်းရှိတယ်။ အရင်ဆုို အဲဒီလိုမရှိဘူး။ တိုးတက်လာတာ။ လူတွေကိုကြည့်ရတာတော့ သိပ်ဝမ်းသာအဲလဲပုံမပေါက်ဘူး။ အလကာားကုရတာတောင် မပျော်ဘူးလားမသိဘူး။ အဲဒါကလည်း မြန်မာပြည်မှာ တော်တော်လေး စိတ်ရှည်ရမယ့်ကိစ္စ။ အခမဲ့ဆေးခန်းဆိုရင် ဆေးလာတောင်းပြီး အပြင်မှာ ပြန်ရောင်းတဲ့သူလည်းရှိတယ်။ ဒါမျိုးတွေကိုလည်း သတိထားရသေးတယ်ထင်တယ်။ ခေတ်က သိပ်မကောင်းဘူး။ စေတနာနဲ့လုပ်လေလေ စိတ်ရှည်ရလေလေပဲ။ အသင်းအဖွဲ့နဲ့လုပ်တော့လည်း တော်တော်လေးကို အပြိုင်အဆုိုင်တွေဖြစ်တတ်သေးတယ်။ စားသောက်ဆုိုင်လည်းရှိတယ်။ ဈေးသက်သာတယ်လို့ပြောတယ်။ လိုက်ပြတဲ့ကောင်မလေးကလည်းစင်ကာပူကနေပြန်သွားတာ။ တိုပါရုိုးမှာဆုိုလား နေခဲ့တာတဲ့။ ကလေးမလေးတွေ တော်တယ်။ အနာဂတ်မှာ အများကြီးအောင်မြင်ဦးမယ်။ စိတ်ထားလှတယ်။
အရင်တုန်းက ဘုရားစာတွေများများဖတ်ပြီး မောက်မာတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိတယ်။ သုခလို့ခေါ်တယ်။ နောက်တော့ကြီးလာတယ်။ ပညာလည်းကြီးလာတယ်။ မာနမကြီးတော့ဘူး။ ကောင်းတာတွေကို မျိုးစေ့ချပေးခဲ့တယ်။ လူဟာ အဲဒီလိုဖြစ်ရမယ်။ အစပိုင်းက မာနကို ပညာကနေသတ်လိုက်တယ်။ ပညာနဲ့ယှဉ်တဲ့ အမြော်အမြင်နဲ့ လူသားတွေအတွက် ကြိုးစားပေးသွားတယ်။ အဲဒါကြောင့်လည်း ဘဘဦးသုခဆိုပြီး လူတကာလေးစားရတယ်။
အာကာကျော်(ထင်တယ်။ နာမည်သိပ်မှတ်မိလေ့မရှိ)ရဲ့ လက်ရာ။ အိုဘာမားပုံဆွဲတဲ့ကောင်လေး။ ဘဘဦးသုခပုံ ဂရပ်ဖစ်တီဆွဲထားတယ်။
နာရေးကနေစလိုက်ပေမယ့်။ ကျောင်းတွေ၊ သင်တန်းတွေလည်း စလုပ်နေပြီ။ နှစ်ထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်။
နည်းနည်းလေးလွဲသွားပုံရတဲ့ quotes. ခဏလာတုန်း ဟိုပြင်ဒီပြင်မလုပ်နဲ့လို့ Zနီးသည်က မှာထားတယ်။ အမှန်ကတော့ Education is the most powerful weapon which you can use to change the world. ဆိုတဲ့ Nelson Mandela quotes ကနေလာတယ်ထင်တယ်။ လွန်တာရှိ ဝန္တာမိ။
ပုံတွေက လက်ရာမြောက်တယ်။ လွတ်လပ်မှုနဲ့ယှဉ်တဲ့ ရသတစ်ခု။
ငယ်တုန်းက လက်ဝှေ့သမား။ နိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာတယ်။ မိန်းမနဲ့ကွဲတယ်။ ထောင်ကျတယ်။ ကမ္ဘာကျော်သွားတယ်။ သူ့အတ္ထုပ္ပတ္တိဝယ်ထားတယ်။ သူသေရင်ဖတ်မယ်ဆိုပြီး မသေခင်ကတည်းကဝယ်ထားတာ။ အခုဖတ်ရတော့မယ်။
သဲခင်းထားတဲ့လမ်း။ နာရေးကူညီမှုအသင်းမြေက နှစ်ဧကလောက်ကျယ်တယ်ပြောတယ်။ အဲဒါမယုံလို့ လိုက်တိုင်းကြည့်နေတာ။
အန်ကယ် ကြိုက်တဲ့ကားရွေးသွားတဲ့။ ငါမသေလောက်သေးပါဘူးလို့ ထင်တာပဲ။ အသက်လမ်းကြောင်းက ခြောက်ဆယ်လောက်တော့အသာလေး။ အရံလမ်းကြောင်းတွေနဲ့ဆိုတော့ ရှစ်ဆယ်လောက်အထိ။ အဲဒီမှာ အထောက်ပါသေးတာဆိုတော့ ၉၂ လောက်မှလာကြည့်ရမယ်။
ကားကောင်းကောင်းမစီးဖူးလိုက်လို့ ဝမ်းမနည်းပါနဲ့။ သေရင် Alphard စီးနိုင်ဦးမှာပါ။ တစ်ချို့တွေ Alphard လှူထားတယ်ပြောတယ်။ ပုံထဲမှာမရှာနဲ့။ တစ်ချို့ကားတွေက လမ်းပေါ်ရောက်နေတယ်။ နာရေးကူညီမှုအသင်းကနေ တစ်ခြားနယ်က အသင်းအဖွဲ့လေးတွေကိုလည်း ပြန်လှူထားတာရှိပါတယ်။ ရောက်ရင် ရှင်းပြတဲ့သူတွေရှိတယ်။ ခင်ဗျားသေချာနားထောင်ခဲ့။ လှူစရာရှိတာလှူပြီး ပြန်မယ်ဆိုပြီး မလုပ်ရဘူး။ လူကြီးလူကောင်းဆန်ကြ။ လူကောင်းတွေ ဘာလုပ်နေသလဲဆိုတာလောက်တော့ အချိန်ပေးပြီး နားထောင်သွားသင့်တယ်။ သိပ်ဝမ်းမြောက်စရာကောင်းတာတွေ။
ခင်ဗျားတို့ကို အပေါ်မှာတစ်ခေါက်ပြောပြီးသား။ မယုံမှာစိုးလို့ ဓာတ်ပုံပြတာ။ အသုဘပွဲစား လုံးဝမဝင်ရတဲ့။ ဟိဟိ။
အခေါင်းတွေထားတာထင်တယ်။ ဝါသနာပါရင် အရောင်ဝင်ရွေးလို့ရသလားတော့ မမေးခဲ့မိဘူး။ အသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့ ပေါတာတွေ၊ ပြောင်တာ၊နောက်တာတွေလျော့ရတော့မယ်။
ခင်ဗျားတို့ကို သေဖို့နေရာပြပြီးပြီ။ မသေခင် အိုရဦးမယ်။ ဇာတိရလာရင် ဇရာ၊ ဗျာဓိ၊ မရဏက ဒီလိုပဲကပ်လျက်လိုက်တာ။ နောက်တန်းသမားလိုပဲ။ ခင်ဗျားဘောလုံးသယ်ပြီး ပြေးလာရင် နောက်တန်းသမား ဇရာက ခင်ဗျားကို ခြေထိုးမယ်။ ဗျာဓိက တွန်းလှဲမယ်။ မရဏကတော့ တစ်သက်လုံးနားသွားအောင် ခြေစုံပစ်ပြီးဖျက်မှာ။ ခင်ဗျားသေမှာပဲ။ အဲဒါ သိပ်ကိုသေချာတယ်။ ကျန်တာတွေက အဲဒီလောက်မသေချာဘူး။ SK2 တွေ ခင်ဗျားဝယ်လည်း အိုခြင်းတရားကိုလှည့်စားလို့မရဘူး။ အသက်ဆိုတာ တွက်နေရင် ကြီးလာတာပဲ။ မေ့ထားလိုက်ရင်လည်း ပြန်မငယ်သွားတော့ဘူး။ Anti-aging cream တွေဘာတွေဆိုတာလည်း နာမည်လောက်ပဲရှိတာ။ အိုခြင်းသဘောကို ကာကွယ်လို့မရဘူး သေလိုက်မှပဲ နောက်ဘဝ လူပြန်ဖြစ်ရင် နုပျိုသွားနိုင်သေးတယ်။ ဇရာနဲ့ဗျာဓိကတွဲလာတာပဲ။ အိုတယ်။ နာတယ်။ အိုလို့လည်းနာတယ်။ နာလွန်းလို့လည်း အိုကုန်တယ်။ စိတ်နာလို့လည်းအိုတယ်။ ရောဂါတွေနာလို့လည်းအိုတယ်။ မသေခင် အိုနာရှိတယ်။ အိုတာဟာ နာတာပဲ။ တစ်ချို့အလုပ်တွေ အိုရင်လုပ်လို့မရတော့ဘူး။ အသက်အလိုက်လုပ်ရတာတွေရှိတယ်။ ဉာဏ်ပညာ ဦးစားပေးအလုပ်တွေသာ အသက်ကြီးချိန်အထိလုပ်လို့ရတယ်။ မော်ဒယ်အလုပ်တို့၊ ဘောလုံးသမားအလုပ်တို့ဆို ၃၀ လောက်ဆို အအိုကြီးအိုသွားပြီ။ နားလိုက်ရတော့တာ။ အဲဒီတော့ ဘိုးဘွားရိပ်သာသွားကြည့်တယ်။ အိုမင်းခြင်းဟာ ဘယ်လိုမျိုးလဲ။ သိဒ္ဓတ္ထဟာ မြင်းရထားပေါ်ကနေ သူအို၊ သူနာ၊ သူသေ၊ ရဟန်းကို အစဉ်အတိုင်း ကြည့်သွားတာဟာ သံဝေဂဉာဏ်အတွက်ပဲ။ သံဝေဂဉာဏ်မရှိရင် ဝိပဿနာအလုပ် လုပ်လို့မရဘူး။ ဖှောရှော ဝိပဿနာတော့ဖြစ်တယ်။ အားကောင်းတဲ့ ဝိပဿနာမဖြစ်ဘူး။ သံဝေဂဉာဏ်လေးရှိမှ အော .. လောကကြီးဟာ နေပျော်စရာ ဘာရှိသလဲ။ တွယ်ငြိစရာဘာရှိလဲဆိုပြီး စိတ်က ဝိမုတ္တိဘက်ကို နည်းနည်းလေး ခေါင်းလှည့်တယ်။ မဟုတ်ရင်တော့ ငါသိပ်ပျော်တယ်။ ဒီမှာ အိုကေနေတာ။ ဟိုဘက်ကမ်းမကူးဘူးဆိုတဲ့ သက္ကာယဒိဌိလေးက ပြန်ပြန်ဆွဲခေါ်သွားတာပဲ။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်မှ သံဝေဂရရင် နောက်ကျသွားပြီ။ လူဟာ ကြီးလေ​ဉာဏ်တုံးလေပဲ။ တရားအလုပ်တွေဘာတွေဆိုတာ ဉာဏ်ထက်တုန်းလုပ်ရတာတွေ။ အိုမှလုပ်ရင် မသေချာဘူး။ သမာဓိတောင် ကောင်းကောင်းမရနိုင်တော့ဘူး။ စိတ်အင်အားတွေ အများကြီးလျော့သွားပြီ။ ခန္ဓာကိုယ်ကလည်း အင်တိုက်အားတိုက် စူးစိုက်နိုင်ဖို့ မကူနိုင်တော့ဘူး။ ငယ်တုန်းမိုက်နေရင် ကြီးရင် မှိုင်သွားရမယ်။ အခုတရားအားမထုတ်နိုင်သေးဘူးလား။ ကိစ္စမရှိဘူး။ သံဝေဂဉာဏ်လေးနဲ့နေ။ အင်မတန်ကောင်းတယ်။ စိတ်ဒုက္ခနည်းတယ်။ အဆိုးလောကဓံကို လေလေးချွန်ရင်း ရင်ဆိုင်နိုင်တယ်။
အဖိုးအဖွား တစ်ရာ ဝန်းကျင်နဲ့ ဝန်ထမ်းအနည်းငယ်အတွက် တစ်ရက်ကို စားသောက်စရိတ် အဲဒီလောက်ကုန်ကျတယ်။ ဒါက ကန်တော်လေး ဘိုးဘွားရိပ်သာကစာရင်း။ ကြက်သားနဲ့နေ့လည်စာကျွေးတယ်။ ကြက်သားဆန်ပြုတ် ညစာကျွေးတယ်။ ခရစ်ယာန်သီလရှင်တွေ စောင့်ရှောက်ထားတာ။ လူကြီးတွေကတော့ ဘာသာအမျိုးမျိုးပဲ။ အယောက် ၁၀၀ ဝန်းကျင်ထင်တယ်။ အဲဒါလည်း ရိုက်လာတာ ပုံရှာမတွေ့သေးဘူး။ လှူမယ့်လှူ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေကို လှူလိုက်တယ်။ သူတို့ ဝဝစားရပါစေ။ ပျော်ပါစေ။ ခန္ဓာဝန်ကို ကောင်းကောင်းထမ်းနိုင်ပါစေ။
အသက်ကြီးသွားတော့ အိုသွားတာပေါ့။ အိုခြင်းဟာ ဘာမှမကောင်းဘူး။ ငါတို့ တစ်နေ့အိုရမယ်။ Zနီးသည်က သွားတွေမရှိတော့ရင် ငါ့ကို ဝေါင်လို့ ခေါ်မှာပဲ။ အတွေးနဲ့တင်ရယ်ချင်စရာကြီး။ ဒါပေမယ့် အိုခြင်းတရားဟာ ရယ်စရာမဟုတ်ဘူးဗျ။ ခင်ဗျားအနီးကပ်သွားကြည့်။ အိုခြင်းတရားမှာလည်း ကျက်သရေရှိတယ်။ လူ့ဂုဏ်သိက္ခာရှိတယ်ဗျ။ သူတို့ကို activity လေးတွေပေးထားရမယ်။ ဒါမှ ကျန်းမာပြီး စိတ်ချမ်းသာမှာ။ ဆေးကုပေးဖို့ အထူးကုတွေလည်း လာတယ်။ သွားဆရာဝန်လည်းလာတယ်။ကောင်းတာပဲ။ ပူစရာမလိုတော့ဘူးပေါ့။ အိမ်မှာနေရင် ပိုက်ဆံကုန်ဦးမယ်။ ဘိုးဘွားရိပ်သာမှာ ငြိမ်းတယ်။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျား အိုခြင်းတရားကိုတော့ ဘယ်မှာနေနေ ရင်ဆိုင်ရဦးမယ်။ ကြက်သားလေးစား၊ ဆန်ပြုတ်လေးသောက်ပြီး ရင်ဆိုင်ရတာ အစာအိမ်အလွတ်နဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာထက်တော့ သက်သာမှာပါ။ အဖေ့မွေးနေ့ ၂၁ ရက်နေ့မှာ နောက်ထပ်တစ်ခါ ကြက်သားနဲ့ နေ့လည်စာ ထပ်ကျွေးဖို့ လှူထားသေးတယ်။ သူတို့ ခင်ဗျားကို မသိလည်း ခင်ဗျားရဲ့စေတနာကိုတော့ သူတို့သိတယ်။ သူတို့ မေတ္တာပို့ပေးရင်လည်း ပို့ပေးလိမ့်မယ်။ မပို့ပေးရင်လည်း မပို့ပေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ခင်ဗျားဘဝမှာ အမှတ်တရဖြစ်သွားရမယ်။ လူတွေအိုတတ်ပါလား။ အိုလာရင် မစွမ်းတော့ပါလား။ မစွမ်းတော့ရင် အကူအညီယူရပါလားဆိုတာဆက်တိုက်ကြီး တွေးမိသွားတယ်။
ဗုဒ္ဓအသက်ကြီးတော့ အရေခွံတွေ တွန့်တာကို အာနန္ဒာကြည့်ပြီး စိတ်တောင်မကောင်းဖြစ်ရသေးတာလေးကို သတိရတယ်။ ငယ်တုန်းက သိပ်ချောသိပ်လှတာ။ အခုခေတ်ဆိုရင် ဘောလီးဝုဒ်က ရုပ်ရှင်ရိုက်ဖို့ လူထွက်ပါဆိုပြီး နေ့တိုင်း နားလာပူနိုင်တဲ့ရုပ်ရည်မျိုးရှိတာ။ ဒါပေမယ့် အိုခြင်းသဘောကို မလွန်ဆန်နိုင်ဘူး။ ဒါက ခန္ဓာရဲ့သဘာဝပဲ။ ဂေါတမဗုဒ္ဓဟာ အသက်ကို ဆယ်လပဲ ဆွဲဆန့်ထားတယ်။ ဒါကလည်း သူ့အတွက်မဟုတ်ဘူး။ သုဘဒ္ဒအတွက်ပဲ။ ဒီငနဲက ကုသိုလ်ကံလေးရှိတော့ ဘုရားတောင် သေခြင်းကို ဆယ်လတားပြီး တရားဟောရတာ။ ကုသိုလ်ကံမကုန်သေးတဲ့ လူမိုက်တွေက ဘုရားကိုတောင် ဆယ်လ ဒုက္ခပေးနိုင်တာ သံဝေဂရစရာကောင်းတာပဲ။ သေခြင်းတရားမတိုင်ခင် အိုခြင်းဟာ အင်မတန်နှိပ်စက်နိုင်တာ။
ငယ်တုန်းက အမှတ်ရစရာတစ်ခုရှိသေးတယ်။ အဖွားနဲ့နေတယ်။ မွေးကတည်းက အဖွားကပဲ မွေးထားတယ်ထင်တယ်။ အမေက ရုံးတွေဘာတွေ သွားသေးတယ်။ အဖွားကတော့ တစ်နေ့လုံးအိမ်မှာရှိတယ်။ မုန့်ဖိုးလည်း ပိုပေးတယ်။ တစ်နေ့မှာ မျိုးကျော့မြိုင်ရဲ့ လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခသီချင်း နားထောင်နေကြရင်း အဖွားက ဒါသိပ်မှန်တာပဲလို့ပြောတယ်။ အသက်ကြီးလာတော့ နာကျင်မှုတွေ ပိုဖြစ်လာတာကို ဆိုလိုပုံရတယ်။ အခုတော့ အဖွားဆုံးသွားပြီဆိုတော့ ဒါတွေ ပြောမယ့်သူမရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ဘိုးဘွားရိပ်သာက အဖွားတွေမြင်ရတော့ ကိုယ့်အဖွားကိုယ်သတိရတယ်။ သူတို့မှာတော့ မြေးတွေမရှိရှာဘူးထင်တယ်။ မြေးတွေကတော့ အဖွားကိုချစ်တာပဲ။
အဖွားတွေထိုင်နေကြတယ်။ ထိုင်နေခြင်းမှာကိုက တရားသဘောတစ်မျိုးပါတယ်။ လောကမှာ အိုခြင်းတရားကိုမေ့နေတဲ့သူတွေကို သတိပေးနေတဲ့ တည်ရှိမှုမျိုးပဲ။ ခန္ဓာဝန်လေးသလား အဖွားတို့။
ဘီးတပ်ကုလားထိုင်နဲ့အဖွား။ မုန့်ဖိုးရရင် ပျော်တာပဲ။
သေခြင်းတရားရော အိုခြင်းတရားကိုပါ ခင်ဗျားတွေ့ပြီးရင် စေတီသွားပေတော့။
ပန်းပုဆိုင်။ ကမ္ဘာအေးဘုရားက။ ငါးရာတန်လေးတွေကို ဈေးဆစ်နေတာနဲ့ Zနီးသည်က သူသာဆိုင်ရှင်ဆိုရင် ကျုပ်ကို ရိုက်ထုတ်မယ်လို့ပြောတယ်။ အများကြီးဝယ်တာပဲ ဈေးဆစ်ရတာပေါ့။ သူဘာပြောသလဲဆိုတာ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။ မလျှော့ပေးလည်း ဝယ်မှာပါပဲ။ လူတွေက ဈေးဆစ်ရင်ပြန်ပြောတဲ့စကားလုံးတွေကို အဘိဓာန်ပြုစုတဲ့သူများရှိလာခဲ့ရင် ကျုပ်ကို အကြံပေးခေါ်ကြပါ။
ဘုရားပေါ်မှာ အေးချမ်းလိုက်တာ။ ကင်မရာခွန်ဆောင်ခိုင်းတော့ ကင်မရာပြန်သိမ်းလိုက်တယ်။ မရိုက်တော့ဘူး။ ဖုံးနဲ့ပဲရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်။ ငါ လူလည်ပါ။
ငယ်တုန်းက အဲဒီမှာ တရားသွားသွားထိုင်တယ်။ ဂန္ဓာရီသမားဘဝတုန်းက။ သိပ်အေးချမ်းတယ်။ အဲကွန်းလည်းရှိတယ်။ အဲဒီအဲကွန်းရဲ့ ကျေးဇူးလည်းရှိခဲ့ဖူးတယ်။ ကျေးဇူးရှင်ပုံလေးအပါရိုက်ခိုင်းရတယ်။
တစ်ကောင်တည်းပေမယ့် ကြွက်မဟုတ်ဘူး။ ကြောင်။
ဘုရားနားမှာပေါက်တဲ့ ထန်းပင်ဟာ သိပ်လှတာပဲ။
မဂျူးးသာ ရှိသေးရင် ကိုယ်အဲဒီလိုပြောရင် မင်းယုံလိုက်ပါဆိုတာလေးထည့်ဦးမယ်ထင်တယ်။
(သူလည်းအသက်ကြီးပြီဆိုတော့ ရှိသေးရင်လို့ရေးလိုက်တယ်။ အခုခေတ်ကမလွယ်ဘူး။)
ခေါင်းလောင်း။ အသံသာတယ်။ ပြုလိုက်တဲ့ ကုသိုလ်တွေ အမေနဲ့အဖွား အမျှလာယူနိုင်ရင် လာယူကြပါ။ မယူနိုင်တော့ရင်လည်းမလာပါနဲ့။ ကိုယ့်ကံနဲ့ကိုယ်ပဲ။
ဓာတ်ပုံဆရာကတော့ မိုးရွာလည်းရိုက်။ နေပူလည်းရိုက်ပဲ။
လှိုဏ်ဂူထဲက ဆင်းတုတွေ။ အဲဒီမှာ လေးသင်္ချေဆိုတာကို သတိရတယ်။ အဲဒါမူကွဲတွေအများကြီး။ အရှင်ဆေကိန္ဒကတော့ သုည အလုံး ၁၄၀ လို့ပြောတယ်။ ကြာလွန်းတယ်ပြောတာ။ ကမ္ဘာပေါင်း အဲဒီလောက်ကြာသွားတယ်ပြောတာတဲ့။ အဲဒီနေ့မှာပဲ ဒေါက်တာနန္ဒမာလာ ဟောတာတစ်ခုမှာတော့ သုမေဓာဘဝမှာ နိဝတဗျာဒိတ်ယူလိုက်တယ်။ ဗျာဒိတ်ယူတော့ ဒီပင်္ကရာဘုရားလက်ထက်။ အဲဒီအချိန်ပြီးတော့ ကမ္ဘာတွေ သောက်သောက်လဲကြာသွားတာ ဘယ်လောက်ကြာမှန်းမသိဘူး။ ရေတွက်လို့မရနိုင်လောက်အောင်ကြတယ်။ နောက်ဘုရားတစ်ဆူပွင့်တယ်။ အဲဒီအချိန်ကို တစ်အသင်္ချေလို့ခေါ်တယ်။ အဲဒီလို ဘုရားလေးဆူပွင့်လောက်အောင်ကြာသွားတဲ့ အင်မတိအင်မတန်အချိန်ကြာကြီးကို လေးအသင်္ချေ (အတိုကောက် လေးသင်္ချေလို့ခေါ်တယ်)လို့ဆိုတယ်။ ဒီပင်္ကရာဘုရားနဲ့ ရဟန္တာတစ်သိန်း အနင်းခံရရင်တော့ သုမေဓာရှင်ရသေ့ဟာ အင်မတန် နာကျင်ပြားချပ်သွားမှာပဲလို့တွေးမိတယ်။ အဲဒါလိုတွေးမိတတ်တာကြောင့် ဗုဒ္ဓဝင်တွေဘာတွေ ဖတ်လေ့မရှိဘူး။ ထားပါတော့။ သတ္တိအင်မတန်ကောင်းမှ ဘုရားလောင်းဖြစ်တယ်။ ဆန္ဒာဓိပတိလို့ခေါ်တယ်။ ဆန္ဒအားကောင်းလာရင် ကျန်တာတွေအားလုံးကိုစွန့်နိုင်တယ်။ ၂၄ ပစ္စည်းက အဓိပတိပစ္စယောကို အကျယ်လေ့လာဖို့လိုတယ်။ အဓိပတိကြီးတွေကိုသိမှလည်း သူတို့စွမ်းအားကို သိနိုင်တယ်။ မဟုတ်ရင် ဘာဖြစ်လို့ ဘာဖြစ်တာမှန်းမသိဘဲနေမယ်။ ရွတ်တာတွေထက် တကယ်သိဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်ထင်တယ်။ ၂၄ ပစ္စည်းကို ဘုရားရှိခိုးလို့ပြောတာလည်းရှိတယ်။ အဲဒီလိုပဲ တရားက ကြံကြံဖန်ဖန်ကပ်ပြီး ကွယ်နေတာမျိုးထင်တယ်။ သြကာသ ဘုရားရှိခိုးဆိုတာ သိကြားမင်းက သေခါနီး တရားလာနာရင်း နတ်ပြည်ကစုတေပြီး ချက်ခြင်း သောတာပန်လည်းတည်၊ သိကြားမင်းလည်းဖြစ်သွားလို့ မိန်းမတွေ အများကြီးပြန်ရသွားတာနဲ့ ဝမ်းသာအားရကြီး ရှိခိုးသွားတာပဲ။ ကျုပ်ထင်တာမမှားရင် နတ်ပြည် အမြန်ပြန်ကဲဖို့ အကျဉ်းချုပ်ရှိခိုးသွားတာပဲ ဖြစ်ရမယ်။ အဲဒါကြီးကိုဖတ်ပြီးကတည်းက ကျုပ်ယောက္ခထီးကြီး သြကာသရှိခိုးနေပြီဆိုရင် ကျုပ်ပြုံးမိတော့တာပဲ။
တိမ်တွေကလှလိုက်တာ။ ဦးသိန်းဇော်မှာ တရားနဲ့ဖြေရတယ်။
ကောင်းကင်ပြာပုံကအစ မြန်မာပြည်မှာ သိပ်လှတယ်။ စင်ကာပူလို ဟေ့ဇ်တွေဘာတွေမရှိသေးဘူး။ ကြည်ကြည်စင်စင်။
အဘယလာဘမုနိ။ ကျမ်းမာလာဘ်ပေါဘုရားတဲ့။ ဘုရားသာရှိသေးရင် နာမည်ပေးတဲ့သူတွေကို ဟဲ့ တုစ္စ၊ မဂ်ဖိုလ်မနီး အချည်းနှီးသော ငနဲတို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ပေါချင်ပေါ၊ ဘုရားတွေ နာမည်လျှောက်မပေးနဲ့ အစချီတဲ့ တစ်ဂါထာလောက်တော့ ဟောခဲ့မှာပဲ။
အမှတ်တရတွေပါတဲ့ ပန်းချီ။ ကျောက်တုံးသယ်လာတုန်းကပုံ။ အရင်တုန်းက ထေရဝါဒမှာ ရုပ်ပွားတော် အလေ့အထမရှိဘူး။ အဲဒါ ရောမကနေပြန်လာတဲ့ ငနဲတွေ အိန္ဒိယမှာ စတန့်ထွင်လိုက်တာပဲ။ ဘုရားဆင်းတုတော်ထုလုပ်တယ်ဆိုတာ အင်မတန် ခက်မှာပဲ။ မူရင်းပုံလည်း မမြင်ဖူးတော့ ဘယ်လိုထုသလဲမသိဘူး။ အဲဒါလည်းသိပ်မပြောရဲဘူး။ မိုးပြာဆတော်လည်း ဘုရားဆင်းတုတော်မလှဘူးပြောတာကို ဘုရားကို မကြည်ညိုတတ်ဆိုပြီး ဓမ္မန္တရာယ်သင့်ကုန်တာ။ ရွှေပြည်ကြီးက အယူအဆတွေကတော့ အင်မတန်ရယ်ရတယ်။ ဟိုတစ်နေ့က နာတဲ့တရားမှာလည်းပါတယ်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းထဲသွားရင် ဖိနပ်ချွတ်တယ်တဲ့။ ကားကြတော့ မောင်းဝင်တယ်။ စက်ဘီး၊ဆိုင်ကယ်လည်းစီးသတဲ့။ ဖိနပ်ကိုချွတ်ရတာက ယာဉ်လို့သတ်မှတ်လို့ချွတ်တာ။ ယာဉ်တွေထဲမှာ ကားနဲ့စက်ဘီးက ဖိနပ်ထက် ပိုကြီးတဲ့ယာဉ်တွေမဟုတ်လား။ အဲဒီတော့ ရယ်တော့ရယ်ရတယ်။ သိပ်လည်း မရယ်ရဲဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုယ့်ဟာကိုယ်နေရတာပဲ လွတ်လပ်တယ်။ ဘာသာရေးရဲ့ အနှစ်သာရကိုပဲရှာကြပါ။ ကျန်တာတွေကို သိပ်အာရုံမထားကြပါနဲ့။ ပိုကောင်းတဲ့ လောကကြီးဖြစ်ဖို့ နည်းနည်းလောက် ပိုပြုံးပြီး၊ ချို့တဲ့သူတွေ့ရင် နည်းနည်းမျှဝေတာပေါ့။ ဒီလောက်ပဲကောင်းပါတယ်။ သံဝေဂဉာဏ်လေးရလာရင် အပျောက်မခံဘဲ အဲဒါလေးကို ပျိုးထောင်ကြဖို့တော့ မမေ့ကြနဲ့ပေါ့ဗျာ။ တန်ဖိုးရှိတာလေးရထားရင် ဘယ်သူ့မှ ထုတ်မပြတာ အကောင်းဆုံးပေါ့။ ။
Labels: Abayalarbamuni Pagoda, FFSS, KabarAye Zedi, Yangon Photos